ओलीले मेस्सीको साथ छोडे, देउवाको दह्रो समर्थन ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
असार ९, २०७५ शनिबार ८:१७:४६ | मिलन तिमिल्सिना
समर्थकको फुरफुर विपरीत मेस्सी र उनको टिम अर्जेन्टिनाले यसपालि झुर खेले । जर्सी प्रदर्शन, जबर्जस्त समर्थन, रुद्रीपूजा, अनुमान र पुकारकोसमेत केही जोर नचलेपछि अजेन्टिनाका धेरै समर्थक जर्सी च्यातेर अर्को टिममा प्रवेश गरिसके । कोही चाहिँ घोसेमुन्टो लगाएर झोक्राइरहेका छन् । कसैका लागि हिजैदेखि विश्वकप नै सकिइसकेको छ ।
मेस्सी र अर्जेन्टिनाको समर्थन गर्दै फुर्सद मिलाएर भकुण्डो हेर्ने शीर्ष नेताहरुलाई पनि नमज्जा लागेको छ । मेस्सीको पछिल्लो खेल हेरेपछिनेपालका चार शीर्ष नेताको प्रतिक्रिया जस्ताको त्यस्तै :
केपी शर्मा ओली : मेस्सीको अर्जेन्टिना र देउवाजीको कांग्रेस उस्तै भैसक्यो
मेस्सीको कुरो मात्रै बेसी रहेछ । जाबो त्यो डल्लोलाई लात्ताले ड्याङ कि ड्याङ हानेर गोल गर्न आइतबार पर्खनै नपर्ने हो । मैले त उनको बारेमा अर्कै कुरा सुनेको थिएँ – डल्लो भेट्ने बित्तिकै लात्ताले हानेर जालीभित्र छिराउँछन् भनेर । बरु हाम्रै केटो सन्दीपले दुई चारवटा डल्ला के फ्याँक्याथ्यो, चम्किहाल्यो । हाम्रै अर्को केटो विमललाई भकुण्डो हान्न देको भा मेस्सी भन्दा बढी चम्कन्थ्यो ।
चुनावताका साझा हो कि विवेकशील के नामको पार्टीलाई कटाक्ष गर्दै भनेको थिएँ – ‘खेलाडीहरु मैदानमा खेलिरहेका हुन्छन्, छेउपट्टि केटाकेटीहरु छेउमा सिको गरिराखेका हुन्छन् मेस्सीले खेल्दै गरेको ठाउँमा कस्तो हुँदोरहेछ, कत्तिको साह्रो छ, भकुण्डो म पनि हानी हेर्छु भनेर त्यस्तो खेलाडीले काम चल्दैन ।’तर मेस्सीले म जस्तो मान्छेलाई निरास बनायो । निरास मात्र हैन, मेरो कुरै उल्टो हुने डर भयो । मेस्सीलाई त केटाकेटीले नै आच्छु आच्छु पारिदिए ।
अर्जेन्टिनाका ती मेस्सी तासका मिस्सी जस्ता पनि हैन रछन् । उनलाई हराउन एक्का र बास्सा नै चाहिएन । क्रोएसियाको तिर्कीले नै काम गर्यो । पहिले त मलाई यो केटोले केही गर्ला भन्ने लागेकै हो । त्यसमाथि बहुसंख्यक नेपाली उनको फ्यान रछन् । सबैभन्दा धेरै नेपाली उनको समर्थक हुनु भनेको म र मेस्सी उस्तै हुनु हो भन्ने मलाई लागेको थियो ।
नेपालमा मेरोभन्दा बढी उनको क्रेज देखेर मलाई पनि भित्रैदेखि डाहा भयो । मनमनै आफूलाई मेस्सीसँग तुलना गर्थें । उनी फुटबलका मेस्सी, म राजनीतिका मेस्सी । तर आजैदेखि मैले उनलाई भित्रभित्रै दिएको मौन समर्थन फिर्ता लिन बाध्य भएको छु । अब उनीसँग मेरो तुलना हुनै सक्दैन । उनी विज्ञापनका लागि मात्र फिट मान्छे रछन्, खेल्नको लागि होइन ।
हाम्रा देशका मान्छे मेस्सी मेस्सी भन्दै त्यत्तिकै बुरुकबुरुक गरेका रैछन् । चाहिँदोभन्दा बढी फुरफुर र बुरुकबुरुक काम लाग्दैन अब । बाच्छाको पाडो बढी उफ्रियो भने भकारामा लड्छ, दूध चुसेको मुखमा गोबर लाग्छ । अवस्था अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै भयो ।
केटाकेटीलाई दसैँ आएजस्तो ठिटाहरु टाटेपाटे जर्सी तन्काएर चोकचोकमा डुले । मेरै जिल्लातिरको एउटा केटोले रुद्रीपूजा पनि लगायो भन्ने सुनियो । पूजा लगाएर, ज्योतिषलाई हात देखाएर हुने भए कांग्रेसले पनि चुनाव जित्थ्यो नि । रुद्रीले हुने भए अहिले देउवाजी मेरो ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, म मेस्सीको ठाउँमा पुग्थेँ । पूजाआजा, जोखना, चुरीफुरी सबै बेकारका कुरा हुन् ।
अब मेस्सीको अर्जेन्टिना र देउवाजीको कांग्रेस उस्तै भैसक्यो । सधैँ एउटैले जित्छ र उसकै मात्र हालीमुहाली हुन्छ भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुन सक्नुपर्छ । अब उपरान्त यो देशमा कांग्रेस नफर्केजस्तै विश्वकपमा मेस्सी फर्कंदैनन् । (यताउता हेर्दै) यसो भन्दा आचारसंहिता त लाग्दैन होला नि ?
हरेकपटक विश्वकप भन्दै भएभरका खेलाडीले त्यहीएउटा भकुण्डोलाई लात्तीले हानेर विश्व उँभो लाग्दैन । रिस भकुण्डोमाथि खन्याएर मैदानमा उफ्रिने होईन अब । मैदानबाट बाहिर आएर आर्थिक समृद्धिमा लाग्ने बेला हो ।
अब खेलको होइन, रेलको कुरा गर्नुपर्यो । अर्को विश्वकपसम्म नेपालमै रेल आइसक्छ । रेल चढ्ने बेला फेरि पनि नेपालीले मेस्सी मेस्सी भन्दै टाटेपाटे जर्सी तन्काउँदै गरे भनेरेल दुर्घटना हुन सक्छ । त्यसैले अब मेस्सीले कहिल्यै नफर्कनेगरी सन्यास लिएकै राम्रो हुन्छ । मेस्सीको ठाउँमा एक्का आउँछ, बास्सा आउँछ, गुलाम र दहरले पनि काम गर्ला । नभए जोक्करले नै काम चलाउन सकिन्छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड : रुद्री पूजा गरेर हुँदैन, भैँसीपूजा गर्न जान्नुपर्छ
ओलीजीको कुरामा अब मैले विमति राख्नै मिल्दैन । उहाँले जे–जे भन्नुभयो, कुरो प्रष्ट रुपमा त्यही हो भनेर बुझ्दा हुन्छ । तर पूजाआजाको विषयमा भने मैले थोरै प्रष्ट्याउनुपर्ने हुन्छ । अर्जेन्टिनालाई जिताउन नेपालीले रुद्रीपूजा पनि गरे भन्ने पनि सुनेको हो । तर फेसबुकमा भिडियो हेर्ने फुर्सद चाहिँ मिलेन । रुद्री पूजा गर्ने काम्रेडले मसँग सम्पर्क गर्नुभएको भए मैले अलि गहन र गौरवशाली सल्लाह दिन्थें । मने गहन र गौरवशाली सल्लाह के भने अहिलेको जमानामा रुद्री पूजा गरेर हुँदैन, भैँसीपूजा गर्न जान्नुपर्छ ।
कुनै बेला मैले पनि भैँसीपूजा गरेको थिएँ । भैँसीपूजा गर्नेबित्तिकै केही लाभ पनि भयो । तर पछि ममाथि षड्यन्त्र हुन थाल्यो । माओवादी भएर भैँसीपूजा गर्ने भनेर साथीहरुले उडाउनुभयो । त्यसपछि मलाई भैँसीपूजा गर्ने आँट आएन र अहिले छँदाखाँदाको पार्टीलाई इतिहासको पानामा बिसाएर केपीजीसित काँध जोड्न आइपुगेको छु ।
र मेस्सी कम्रेडलाई मेरो के सल्लाह छ भने अब समयअनुसार चल्न सक्नुपर्छ । एउटै टिमको नाममा त्यही भकुण्डोलाई लात्तोले हानेर कतै पुग्न सकिँदैन । विचार नमिलेपनि आफ्नो स्वार्थ मिल्ने टिमसँग एकता गर्नुहोस् । बेलैमा एकता गर्नुभयो भने गोल हान्न नसके पनि तपाईँको इज्जत र अस्तित्व चाहिँ हराउँदैन भन्ने म एक्लो अध्यक्ष रहेको हाम्रो पहिलेको पार्टीको ठहर हो ।
मेरो हिसाबमा पोर्चुगलतिरका रोनाल्डो काम्रेडसँग मिल्न सक्नुभयो भने फाइदा होला । व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने त म रोनाल्डोको फ्यान हुँ । उनको जर्सी पनि रातो छ । रातो क्रान्तिको प्रतीक । कुनैबेला क्रान्तिमा लागेको मान्छेलाई सधैँ रातो मन पर्छ । त्यो सेतो र निलो मिसिएको टाटेपाटे जर्सी फालेर रातो रोज्नुहोस् । एउटै टिम बनाएर दुवैले नेतृत्व सम्हाल्नुभयो भने कुरा काट्नेले कुरा काट्दै गर्छन् । तर तपाईँलाई चाहिँ फलिफाप हुने निश्चित देख्छु ।
शेरबहादुर देउवा : मलाई पार्टीभित्र ख्याउँख्याउँ, मेस्सीलाई टिमभित्र ख्याउँख्याउँ !
प्रचण्डजीले मेस्सीलाई काम्रेड भनेकोमा मेरो घोर आपत्ति छ । ए बाबा कांग्रेस जस्तो हालतभएको मान्छेलाई काम्रेड भन्न मिल्छ ? भन्ने नै हो भने दाइ भन्नुहोस् न । मेस्सीले नेतृत्व गरेको अर्जेन्टिना र मैले नेतृत्व गरेको कांग्रेसमा धेरै कुरा मिल्दाजुल्दा छन् ।
सबैभन्दा पहिले हाम्रो झण्डा र अर्जेन्टिनाको जर्सी हेर्नुहोस् । हाम्रो झण्डामा रातो र सेतोको धर्को छ, अर्जेन्टिनाको जर्सीमा निलो र सेतो । हाम्रो चारतारे झण्डा, उनीहरुको दुईतारे । झण्डैझण्डै झण्डा नै मिलिसकेपछि हाम्रो स्वभाव पनि मिल्ने नै भयो ।
मलाई चुनावमा जसरी घेराबन्दी गरियो, मेस्सीलाई विपक्षीले त्यसैगरी घेराबन्दी गरे । भनेर भन्देखिनलाई उनलाई गोल गर्नबाट रोक्ने काम भयो । विपक्षी खेलाडीको तालमेलकै कारण उनले गोल गर्न नसकेका हुन् । ए बाबा एउटाको पछिल्तिर दुईचारजना तालमेल गरेर कुदेपछि कसरी जित्न सकिन्छ ?टिमभित्रै पनि अन्तर्घात हुन सक्छ ।
मेरो विचारमा त अर्जेण्टिनाले गोल हान्ने गोलपोष्ट पनि सानो भयो । विपक्षीले घेर्दाघेर्दै गोलपोष्ट नजिकसम्म बल पुर्‍याउन सक्नु नै उनको बहादुरी हो ।
त्यसमाथि सधैँ जितिरहन पर्छ भन्ने के छ ? खै हामीले यसपाली चुनाव जितेनौँ । तैपनि मलाई चिन्ता छैन । हामीले हार्यौँ भनेर कोकोहोलो त मच्चाएनौँ नि बाबा । ओलीजी र प्रचण्डजी त खुसी हुनुहुन्छ नि ! आफ्ना पार्टीका साथीहरु रिसाएर के भो त ? उनीहरु त पहिले जितेको बेला पनि यसैगरी रिसाउँथे । आफ्नालाई भन्दा अरुलाई खुशी बनाउन सक्नु, विपक्षीको मन जित्न सक्नु नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो उपलव्धी हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
त्यसमाथि जित्न टिमवर्क चाहिन्छ । मैले र मेस्सीले मात्रै एक्लै के गर्नु ! म एक्लैले जितेर हुने भए चुनावमा कांग्रेसले जित्थ्यो नि ! मैले जितेर पनि कांग्रेसले जितेन, मेस्सीले जित्न खोजेर पनि अर्जेन्टिनाले जितेन ।
मलाई पार्टीभित्र ख्याउँख्याउँ गर्छन्, उनलाई टिमभित्र ख्याउँख्याउँ गर्छन् । म एक्लैले कांग्रेसमा केही गर्न नसकेजस्तै उनी एक्लैले टिमलाई केही गर्न सकेनन् । मलाई पार्टीभित्र एक्ल्याएजस्तो मेस्सीलाई पनि टिमभित्र एक्ल्याइएको छ नि । म पनि हार्न जान्या मान्छे त कहाँ हो र मेस्सीजस्तै ।
गोलकिपर पनि हाम्रा रामचन्द्रजीजस्ता भए । त्यसै बुरुकबुरुक उफ्रने मात्रै, गर्न चाहिँ केही नसक्ने । किपरले ब्लन्डर गरे । त्यस्तो पनि किपर हुन्छ, जाबो एउटा भकुण्डो छेक्न नसक्ने । छेक्ने, रोक्ने, छल्ने तरीका बरु म सिकाइदिन्छु । मैले अहिलेसम्म रामचन्द्रजी, सिटौलाजी, अनि आफ्नै पक्षका अरु जीहरुको आलोचना छलेकै छु । उनीहरुलाई छेकेकै छु । हिम्मत हुनु पर्यो नि । रामचन्द्रजीले आफ्नै टिमका जोशीलाई चिन्न नसक्दा आफै पछारिनुभो ।
अब रह्यो समर्थकका कुरा । समर्थक भन्या यस्तै हुन् । कहिले बढ्ता बोल्छन्, कहिले चुप लाग्छन् । कहिले बुरुकबुरुक हुन्छन्, कहिले खिसिक्क पर्छन् । बेला आएपछि तिनै समर्थक आफ्ना हुन्छन् । आत्तिनु पर्दैन । एउटा खेल जिते भन्दैमा मात्तिनु पर्दैन । ओलीजी पनि एउटा गेममा गोल गरे भन्दैमा मात्तिनु पर्दैन ।
बाबुराम भट्टराई : स्पेनमा खेल्यो भनेर मेस्सीलाई अर्जेन्टिनामा गन्दै गनेनन्
मेस्सीजी मजस्तै केही गर्न खोज्ने मान्छे हो । उहाँमा ठूलो आत्मविश्वास देखेको छु मैले । तर अहिले मलाई जस्तै मेस्सीको पनि खेदो खन्ने काम भैरहेकोमा मलाई दुःख लागेको छ । ओरालो लागेको मृगलाई खेद्ने होइन, उसलाई त हौसला दिन जान्नुपर्छ।
उनलाई असफल बनाउन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु लागेका छन् भन्ने पनि हाम्लाई लाइराछ । टिममा उनी राम्रा मान्छे हुन् । तर उनीजस्ता राम्रो अरु भएनन् । नेतृत्वले पनि उनलाई देखिसक्दो रहेनछ । मलाई पनि पहिले त्यस्तै व्यवहार हुन्थ्यो । केही गर्न खोज्यो भने खुट्टा तान्ने, हेप्ने, पेल्ने प्रवृतिले नै राम्रा मान्छेलाई अगाडि बढ्न दिँदैन । मैले पनि भारतमा पढेको मात्रै त हो तर भारतको मान्छे भनेर खेद्नुसम्म खेदे । बिचरा मेस्सी स्पेनमा खेल्यो भनेर अर्जेन्टिनामा गन्दै गन्दैनन् । प्रशिक्षक र साथीहरुले नै नगनेपछि मेस्सी एक्लैको के लाग्छ र ? मेस्सी रोबोट त होइन नि भन्ने हाम्लाई लाइराछ ।
टिममा आफूजस्तो राम्रो अरु भएनन् भने छोडेर हिँड्नुपर्छ मैले जस्तो गरी । मेस्सी जी अब नयाँशक्तिमा आउनुभयो भने म पनि उहाँलाई सहयोग गर्न तयार छु । मिल्छ भने आउनुहोस् हाम्रो पार्टीमा, सँगै मिलेर अघि बढौँ । अर्को चुनावमा टिकट मिलाउँला । गोल गर्न नसकेपनि भद्रगोल र गञ्जागोल गर्ने राम्रो अनुभव छ मसँग ।
अन्तिम अपडेट: माघ २०, २०७५
बेन प्रसाद गैरे
June 23, 2018, 10:58 p.m.
Sala bhatmara kamxaina tero lekhna man xa ramro lekh haina bhane nalekh
साह्रै राम्रो व्यंग, पढ्दा मज्जा आयो